Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): ဖားကန့် ဒေသ စစ်ရေးတင်းမာမှု နောက်ဆုံးရသတင်းနဲ့NLD ထိုးစစ်မပြုလုပ်ရေး ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုအကြောင်း...။
ဖားကန့် ဒေသ စစ်ရေးတင်းမာမှု နောက်ဆုံးရသတင်းနဲ့NLD ထိုးစစ်မပြုလုပ်ရေး ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုအကြောင်း...။
at 10/18/2014 11:10:00 PM
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်း၏အမိန့် ဖြင့် ရင်း(၆)ကို ထိုးစစ်ဆင်ရန် တာဆူလျက်ရှိသည့် တပ်မ (၆၆)လက်အောက်ခံတပ်များဖြစ်တဲ့ အင်းမအခြေစိုက် အမှတ် (၅) ခြေမြန်တပ်ရင်း၊ အုတ်ဖိုမြို့ အခြေစိုက် အမှတ် (၆) ခြေမြန်တပ်ရင်းနဲ့ အင်းမ အခြေစိုက် အမှတ် (၈၀) ခြေလျင်တပ်ရင်း ပါဝင်တဲ့ နည်းဗျူဟာတခုဟာ ကံစီဆုိုင်းရာနဲ့ အောင်ဘာလေနယ်တ၀ိုက်မှာ အသင့်အနေထားနဲ့ ရှိနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ နည်းတူ ဓနုဖြူ အခြေစိုက် အမှတ် (၁၀၈) ခြေမြန်တပ်ရင်းကိုတော့ လိုအပ်ရင် ၀င်ကူဖို့ အရံတပ်အဖြစ် အနီးကပ်ထားရှိပြီး ကျန်တဲ့ လက်အောက်ခံ ခြေလျင်တပ်များကိုတော့ ဒေသလုံခြုံရေးအဖြစ် အားလုံး အသင့်ရှိနေကြပါတယ်။
ခုလိုစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတာကြောင့် ဒေသတွင်းကလူထုများ အထူးစိုးရိမ်ပူပန်လျက်ရှိကြပြီးတချို့မှာ ၇ွာများကစွန့် ခွာထက်ဖို့ ပြင်ဆင်သူများကပြင်ဆင်ကြပါတယ်။ ပွင့်လင်းရာသီအတွင်း လုပ်ကိုင်စားသောက်ရမည့်အချိန် စစ်ဖြစ်လာမည်ကို စိုးရိမ်ကြောင့်ကြောင်နေကြတဲ့ ပြည်သူများရှိသလို စစ်ပွဲမဖြစ်ရေးအတွက် လုပ်ရှားမှုတခုကလည့်း မနေ့ ကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။
ယမန်နေ့အောက်တိုဘာလ ၁၇ရက် သောကြာနေ့ က ဖားကန့် ဒေသ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်အဖွဲ့ ဝင်များဦးဆောင်တဲ့ ကားအစီးငါးဆယ်လောက်ဟာ အစိုးရတပ် တပ်မ (၆၆)က ပြုလုပ်ဖို့ တာဆူနေတဲ့ ကေအုိုင်အေ အမှတ် (၆)တပ်ရင်းဖယ်ရေးထုိုးစစ်ကို မပြုလုပ်ဖို့ အရေး ကန့် ကွက် ဆန္ဒုထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လတ်တလော ဖားကန့် ဒေသ စစ်ရေးတင်မာမှုများကို
မီဒီယာတော်တော်များများကနေပြီး ဖော်ပြမှုများရှိခဲ့သလို့ ယခုကဲ့သို့ အင်န်အယ်လ်ဒီက ထိုးစစ်မပြုလုပ်ရေး ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့တာကြောင့် ဒီနေ့ မှာတော့ တပ်မတော်ဖက်က ခေတ္တငြိမ်သက်တဲ့နေတယ်လို့ ကေအုိုင်အေစစ်ဖက် အရာရှိကြီးတယောက်ကဆိုပါတယ်။
ပွင့်လင်းရာသီရောက်လို့ ကျောက်စိမ်းတူးကာလ တလခွဲခန့် မှာ ဖားကန်ဒေသ နယ်မြေစိုးမိုးရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ တပ်မ (၆၆) တပ်မှုးကနေပြီး ကေအုိုင်အေတပ်များကို ဆုတ်ခွာဖယ်ရှားပေးဖို့ နစ်ကြိမ်တိုင် လူလွတ်ဆောင်းဆိုခဲ့ရာပ အခုလိုစစ်ရေးပြင်ဆင်မှုများ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာကျော်လီဒိုလမ်းမကြီးကို လေးလမ်းသွားအဖြစ် ပြန်လည...
NGOs call for govt probe on Roi Ja disappearance
၂၀၀၈ နာဂစ်ဥပဒေဟာ ကျွန် အုပ်ချုပ်ရေးသာ ဖြစ်တဲ့ အကြေ...
Sumlut Roi Ja 【国外资讯】国内外家政团组织要求政府调查春雷瑞嘉案件
ဆွမ်လွတ်ရွယ်ဂျား ကိစ္စမှာ ဆုတောင်း
ဒေါ်လာဈေး ကျပ် ၁၀၀၀ ကျော် ရောက်ရှိ၊ ငွေလဲနှုန်း တည်...
Ntara ai Myen hpyen asu ya hpe ning hkap ga
(54) ning hpring KIO masat n'htoi hpawng.Sumla shi...
ထောင်ဒဏ် နှစ် ၂၀ ကျော်ချခံထားရသည့် ကချင်စစ်ပြေး ဒု...
Burma govt ‘wants ethnic armed groups eliminated’:...
ထိုင်း နှင့် မြန်မာ ဘာတွေကွာ သလဲ
MyenaMung masa manau hpe ning hkap ra
အမေရိကန် သံအမတ်နဲ့ ကချင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် တွေ့ဆ...
Kachin students in American colleges/universities ...
123 Organizations Demand Investigation on Disappea...
အလွတ်တန်းသတင်းထောက် ကိုပါကြီး သေဆုံးခဲ့တဲ့ ကိစ္စကို...
ရှမ်းပြည်နယ်တွင် အစိုးရတပ်နှင့် FUA တပ်ပေါင်းစုကြာ...
ကိုပါကြီးအား စစ်တပ်မှ သတ်ဖြတ်မှု အသေးစိတ်ကို ဖေါ်လိ...
ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းက MPC မှာ ရန်သူ ရှိကြောင်း လွှတ်ေ...
KSDP pati rung lakying hpaw poi sumla
ရေခဲတောင်လှသလောက် ဘ၀မလှကြသည့် ပူတာအိုဒေသခံများ
“ ၀ ” လူမျိုးများ ရဲ့ စာပေ နဲ့ စကား ပါဝင်တဲ့ သီချင...
KIA(6)Dung hpe htim gasat na matu Myen Asuya Hpyen...
Kachin rebels, govt forces in standoff at Hpakant
ဖားကန့် ဒေသ စစ်ရေးတင်းမာမှု နောက်ဆုံးရသတင်းနဲ့N...
တနိုင်း- အောင်လွတ်ကျေးရွာသွားသည့် ကားလမ်းအား အစိုး...
Awng dang lamamatu yawng hta lit nga ai
General Maha Bandula
Lahtaw Zau Mai: First Air Force Pilot
Kachin translation of an article that appeared in ...
social and political effects of the 1950's Kachin ...
HPAKANT HPYEN SHIGA
UNODC defends poppy estimates for Kachin State aft...
KIO closes Hukaung amber mines following tensions ...
Hugawng PaeYuzana Company nga nga ai hpe ginra m...
Du Kaba Sumlut Gun Maw hte ga san ga htai. Oct 4, ...
EU Na Kachin Ni Skype conference hpe Shata mi n la...
Kayin "Karen" Rawt Malan Hpung (4) Rai Nga Ai, KNL...
Peace in Myanmar ????
Mung shawa nsen